2012-07-08 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ငါ့​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို​သုံး​ပြီး keyboard ​မှာ ​ဘာ​တွေ၊ ​ဘယ်​လောက်​ကြာ​ကြာ​ရိုက်​ခဲ့​သ​လဲ
​မိ​မိ​ကိုယ်​ပိုင် laptop (or) Desktop ​ကို ​မိ​မိ​အ​ခွင့်​မ​ရှိ​ဘဲ ​ယူ​သုံး​ချင်​တဲ့​သူ​တွေ​ဘာ​တွေ ​ရိုက်​ပြီး ​မိ​မိ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ ​ရှာ​ခဲ့​သ​လဲ။ ​ပြီး​တော့ ​ဘာ software ​တွေ ​ကို​မ​သိ​တုန်း ​ခိုး​တင်​ထား​ခဲ့​သ​လဲ။ ​မ​သိ​ချင်​ဘူး​လား။ ​သိ​ချင်​ရင်​တော့ ​အ​ခု software ​ကို ​သုံး​ပြီး​တင်​ထား​လိုက်​ပါ။ ​ဒါ​ဆို​ရင် ​ဘာ​တွေ​သုံး​ပြီး ​ဘာ​တွေ​လုပ်​ခဲ့​တယ်။ ​မိ​မိ​ကို ​ဘာ​တွေ​အ​ကောက်​ကြံ​ဖို့​လုပ်​ခဲ့​တယ်၊ ​မ​လုပ်​ခဲ့​ဘူး​ဆို ​တာ​ကို ​သိ​ရ​မှာ​ပါ။ ​သူ​ငယ်​ချင်း​ဆို​ပေ​မယ့် ​သိပ်​ပြီး​တော့ ​မ​ယုံ​လွယ်​ပါ​နဲ့။ ​ငယ်​ပေါင်း​ကြီး​ဖော်​မှ ​မ​ဟုတ်​ရင် ​မ​ယုံ​ရ​ပါ​ဘူး။ ​နောက်​ကြော​ကို ​ဓါး​နဲ့​ထိုး​တတ်​ပါ​တယ်။ ​ကဲ​သိ​ချင်​ရင် ​ဝယ်​ဖတ်​ပါ။
PC ​တစ်​လုံး​လျှင်​မြန်​ဖို့​ရာ TweakNow PowerPack 2012 ​ကို​သုံး​ပေး​ပါ
​မေး ​ထိုက်​ကိုး​ကို​နေ​မင်း​ခင်​ဗျာ ​ကျွန်​တော့်​စက်​ထဲ​မှာ ​ဖွင့်​လို့​မ​ရ​တဲ့ ​ဖိုင်​နာ​မည်​တွေ​နဲ့​အ​များ​ကြီး​ပဲ virus ​လည်း​မ​ဟုတ်​ဘူး။ ​ခု​များ​များ​လာ​လို့ ​စက်​က​နည်း​နည်း​လေး​ချင်​နေ​ပြီ။ ​ကျွန်​တော် software ​တွေ​ကို​လည်း ​ခ​ဏ​ခ​ဏ​ဖြုတ်​လိုက် ​ပြန်​ထည့်​လိုက်​နဲ့ ​လုပ်​နေ​တာ​နဲ့​လည်း ​ဆိုင်​မယ် ​ထင်​ပါ​တယ်။ cleaning ​လုပ်​တဲ့ software ​လေး​တစ်​ခု​လောက် ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး။ ​ကောင်း​ကောင်း​လေး​နော်။
​ဖြေး ​ဒီ​နေ့​အ​ထိ ​ကျွန်​တော့်​လက်​စွဲ​သုံး​နေ​တဲ့ software ​ပါ​ပဲ. ​သန့်​ရှင်း​ရေး​လုပ်​ဖို့​အ​တွက် ​အ​လွန်​မြန်​တဲ့​အ​ပြင် ​မ​လို​တာ ​မှန်​သ​မျှ​ကို ​ခ​ဏ​တာ​အ​တွင်း ​ရှာ​ဖွေ​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​ဖျက်​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​မိ​မိ​ကွန်​ပျူ​တာ ​တ​ကယ်​မြန်​ဆန်​စေ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​တင်​ပြီး​စမ်း​လိုက်​ပါ။ ​မ​လို​အပ်​တာ​တွေ​ကို​တော့ ​တစ်​ခု​ချင်း​စီ ​လိုက်​ရှာ​ပြီး ​ဖျက်​ပေး​ဖို့​လို​ပါ​တယ်. ​ကဲ​လို​အပ်​ရင် ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ပေး​ပါ။ ​တ​ကယ့်​ကို ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ် ​ဆောင်​ထား​သင့်​တဲ့ application software ​တစ်​ခု​ပါ။
Full version with serial number
​အ​ပျော်​တမ်း video edit ​လုပ်​ကြည့်​ရ​အောင်
​အ​ပျော်​တမ်း​ဆို​ပေ​မယ့် ​တ​ကယ်​တမ်း​လက်​တွေ့ ​သုံး​ချင်​လည်း ​သုံး​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ​တ​ကယ်​တမ်း​က ​အ​ပျော်​တမ်း​လို့ ​ရေး​လိုက်​တာ​သည် ​သုံး​ရ​တာ ​အ​ရမ်း​လွယ်​ကူ​တဲ့​အ​တွက်​ကြောင့် ​ရေး​လိုက်​တာ ​ဖြစ်​ပါ​သည်။ ​တ​ကယ်​ကျွမ်း​ကျင်​လို့ ​ဒါ​ကို​ပဲ ​သ​ဘော​ကျ​လို့​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ်၊ ​ကို​ကြိုက်​တာ​ကို​သုံး​ပြီး ​တည်း​ဖြတ်​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​ကဲ​ဘာ​တွေ ​စွမ်း​ဆောင်​နိုင်​သ​လဲ။ ​ဘာ​တွေ​လွယ်​ကူ​တာ​လဲ​ဆို​တော့ .....
* Easy handling (“one click”)
* Adjustment of brightness, contrast etc.
* Adding background music and effects
* Simultaneous encoding of several videos
* Creation of videos in Facebook or MyVideo format
​ကဲ ​အဲ့​ဒါ​တွေ​ပါ​ပဲ။ ​လို​ချင်​ရင် ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​လိုက်​ပါ။
Minus | Filecloud | Mediafire
version ​လည်း​ထပ်​မြင့်​လာ​သ​လို ​လုပ်​ဆောင်​နိုင်​မှု့​လည်း ​များ​လာ ​ပါ​တယ်။ ​တောင်း​ထား​တဲ့​သူ​တွေ ​ရှိ​တဲ့​အ​တွက် ​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ။ ​အ​မည်​တွေ​နေ​တော့ ​လိုက်​ရှာ​ရ​မှာ​မို့ ​မ​ထည့်​တော့​ပါ​ဘူး။ ​ဖျက်​ထား​မိ​တဲ့​ဖိုင်​တွေ။ ​မေ့​ပြီး format ​ချ​လိုက်​မိ​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ပြန်​ပြီး ​ရ​ယူ​နိုင်​သည့် application software ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​ယ​ခင်​က ​တင်​ထား​သော link ​များ​ကို​လည်း ​တစ်​ဖြည်း​ဖြည်း​ချင်း​စီ ​ထပ်​မံ​ပြီး​တော့ ​ပြု​ပြင်​သွား​ပါ့​မယ်။ ​ထပ်​ဖြည့်​သွား​ပေး​ပါ့​မယ်။ ​လို​အပ်​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​လိုက်​ပါ။
​ငါ့​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို​သုံး​ပြီး keyboard ​မှာ ​ဘာေ...
PC ​တစ်​လုံး​လျှင်​မြန်​ဖို့​ရာ TweakNow PowerPack...